Copa America oo lagu soo darayo xulalka Latinka ah ee Yurub, sida Italy, France, Spain iyo Portugal!!!
Wednesday, December 12th, 2018 - 10:34:08
Saturday April 01, 2017 - 07:09:00 in Wararka by Muuse Cabdi
France, Italy, Spain iyo Portugal ayaa waxaa lagu marti qaaday in ay ciyaaraan 2019 booskii uu qabsoomi lahaa Copa America oo lagu madlanaa Brazil.
CONMEBOL ayaa dooneysa in koobka oo ahaa 12 kooxood laga dhigo 16 xul oo tartankaas ka qeyb geli doona.
Kulan uu yeeshay Xiriirka kubbadda cagta ee South America oo ka dhacaya xarunta weyn ee xiriirka kaas waxaa rasmi loogu go’aamin doonaa waxa laga yeelayo soo kordhinta 4ta xul ee dheeriga ah, waxaa warisay Globo Esporte.
Hadda waxaa la ogyahay in ay tartanka ka qeyb qaataan 10 xul oo CONMEBOL ah oo lagu daray United States iyo Mexico, waxaana la filayaa in lagu soo daro xulal kale.
Dalalka Latin-ka ah ee Europe jooga iyo Japan ayaa laga doodayaa in lagu soo daro tartankaas.
Waxay noqon doontaa markii ugu dambeysay ee la arko in sanado kala duwan la ciyaaro koobabka qaramada Yurub iyo kuwa Koofur Ameerika, waxaana mar wada qabsoomi doona European Championships sanadkan 2020 iyo Copa America.
Copa America Centenario Sanadkii 2016, taasoo uu hantay Chile oo u ahaana koobkoodii labaad oo xiriir ah, wuxuu ka koobnaa xulalka ka qeyb gala iyo 6 lagu marti qaaday, waxaa ka mid ahaa Costa Rica, Jamaica, Haiti iyo Panama oo kula biiray USA iyo Mexico.